windows - 8.1 Professional VL (x86/x64) EN-US November 2014
ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ copy right ကြောက်လို့ မြန်မာလိုပဲ တတ်လိုက်ပါတယ်.. အရင်ကလည်း ကျနော်တင်ပေးဖူးပါတယ်. အခုupdate လေးရလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
The Lord of the Rings မြန်မာစာတန်းထိုး
နဂိုထဲက ကောင်းပြီးသား ၀တ္ထုကို ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ကြတဲ့အခါ ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ကြိုက်မတွေ့ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် The Lord of the Rings ဇာတ်ကားတွေကတော့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေသာမက ရုပ်ရှင် ဝေဖန်ရေးသမား တွေ ပါ ချီးကြူးခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားကောင်း ဖြစ်ပါတယ်..
Harry Potter မြန်မာစာတန်းထိုး
Harry Potter ဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးမသိသူမရှိလောက်အောင် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ပါ.. ရုပ်ရှင်တင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး စာအုပ်တွေပါ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ.. ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၁၁ အထိထွက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင် ( ၈ )ကားကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.
Aye ChanAndroid Application
Paint For Android.apk
ရေးဆွဲနိုင်တဲ့ Application ကို
Android phone တွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
လိုချင်ရင် play store ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်သလို
Download Play Store HERE
Download pCloud HERE
Win HlaingAndroid Application
ဖုန်းထဲမှာ Virus တွေကြောက်ကြောက်နေသူများအတွက် Virus ကာကွယ်မယ့် -CM Security Antivirus AppLock v2.9.2 APK
Android OS ကိုင်ဆောင်ထားသော်ဘော်ဒါတို့အတွက် ဖုန်းထဲမှာ Virus တွေ ကြောက်ကြောက်နေသူများအတွက် Virus ကာကွယ်မယ့် Security Antivirus နောက်ဆုံးထွက်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းမှာ Virus ဝင်းလာမှာကြောက်နေတဲ့ဘော်ဒါတွေ ဒီကောင်းလေးကိုသုံးထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီကောင်းလေးမှာတော့ lock apps တွေများများပါဝင်းလာပါတယ်ဗျာ။ ဥပမာ-Lock Contacts, WhatsApp, Facebook messenger,Lock Gallery, Photo, and files တွေကို lock apk တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရသလို antivirus and security တွေကိုလည်း 100% အဖြစ်လည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ဗျာ။ဖိုင်းဆိုဒ်လေးကတော့ 8.91MB ဖြစ်ပြီး Android OS အားမှာသုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Facebook ပေါ်က Video တွေကို ခပ်မြန်မြန်ဒေါင်းယူမယ် - Video Downloader for Facebook v2.7 APK
Android OS ဖုန်းများအသုံးပြုထားသောဘော်ဒါတို့အတွက် အရမ်းကို မိုက်တယ် Downloader for Facebook ကိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဘော်ဒါတို့အတွက် FB သုံးတဲ့အခါမှာ Video ကိုဒေါင်းရန်အခက်ခဲ့ဖြစ်နေသူများအတွက် ဒီ Video Downloader for Facebook Pro လေးနဲသုံးလိုက်ရင် အားလုံးကိစ္စပြီးသွားပြီးခင်ဗျာ..။ ဒီကောင်လေးကတော့ Facebook ပေါ်က ဒေါင်းလုပ်ရာမှာ ခပ်မြန်မြန်ပြီး ဆွဲအားလည်းကောင်းပါတယ်။ အသုံးပြုသူများအတွက် ကတော့ Android OS ဖုန်း 2.3 အထက်ရှိဖုန်းများအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Internet Broser တွေထဲမှာ အားလုံးထက် %100% လောက်မြန်ဆန်တဲ့-Maxthon Web Browser - Fast v4.5.7.1000 APK
Android OS ဖုန်း နှင့် Tablet တွေမှာ အမိုက်စား Application Browser ဖြစ်တဲ့
Internet Broser တွေထဲမှာ အားလုံးထက် %100%aလာက်မြန်ဆန်တဲ့ Maxthon Browser လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ တကယ်လည်းအသုံးပြုကြည့်ပါမှ အရမ်းကောင်းမှန်သတိထားမိတယ်ဗျာ။ ဟိုတုန်းကတော့ ဒီဆော့ဝဲဟာကွန်ပျူတာမှာသာအသုံးပြုလို့ရတာပါ အခုတော့Apk လေးပါထပ်ထွက်လာတော့ ဖုန်းမှာအသုံးပြုလိုတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်လည်း ပိုလို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ ဒီဗားရှင်းမှာဆိုရင်တော့ Featureအသစ်တွေနဲ့မိမိထင်ထားတာထက်ကိုပိုအသုံးပြုကောင်းနေတာပါ။
မိမိဖုန်းမှာ အင်တာနက်အသုံးပြုဖို့ တစ်ခြား Browser တွေထက်%100% လောက်မြန်ဆန်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးကို အသုံးပြုလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Maxthon Browser Apk လေးကိုအသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါလို့ အကြုံပြုပါရစေ။
မိမိတို့Android ဖုန်းရဲ့ Memory RAM ကိုစိတ်တိုင်းကျ Manages လုပ်ပေးနိုင်မယ့်RAM Manager PRO vPro v8.0.0APK ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Full Version Apk လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီRam ပိုင်းဆိုင်ရာကို စီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ application ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ Custom Rom တင်ထားတဲ့ဖုန်းမျိုးဆိုရင် Ram ကို ထပ်မံတိုးမြှင့်ယူလို့ရစေတာဟာ ဒီ app ရဲ့ အထူးကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။Full Version Pro လေးဖြစ်တာကြောင့်Features တော်တော်များများကိုစုံလင်စွာနဲ့အသုံးပြုခွင့်ရစေမှာပါ။apk file size ကလည်း 1.02MB သာသာလေးပဲရှိပါတယ်။ဒီ ​apk ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် မိမိဖုန်းဟာRootဖြစ်​ထားဖို့​တော့လိုပါမယ်​- Android OS Version 2.1နှင့်အထက်ရှိထားသောဖုန်းများမှာထည်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အောက်​ကlink​ မှာ​ဒေါင်းလုပ်​ရယူနိုင်​ပါပြီ။
ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း FB ကနေသိရအောင် Like တချက်နှိပ်ခဲ့ပါ
နိုင်ငံတကာဘောလုံးပွဲတိုင်းကို ဖုန်းနဲ့ ကြည့်ရအောင်
28th SEA Games Singapore 2015 (မြန်မာအသင်းပွဲစဉ်များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန်)
YouTube ပေါ်က သီချင်း (MP3) ၊ ဗွီဒီယို (Video) တွေကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းယူနိုင်တဲ့-SnapTube - YouTube Downloader HD Video v4.0.1.8207 APK
Blog Archive October (1) February (5) January (26) December (10) November (6) October (7) September (6) August (7) July (3) June (16) May (32) April (17) March (101)
Android Application (101)
Android Cleaner Apk (1)
Android Firmware (25)
Backup & Restore လုပ်နည်း (2)
Firmware Account ဆိုင်ရာ (1)
Firmware တင်နည်း (19)
Hardware နည်းပညာများ (1)
Phone Drivers (2)
Photo Slideshow software (1)
Root လုပ်နည်းများ (30)
TWRP Recovery များ (1)
Windows 8 ဆိုင်ရာ (1)
Copyright © ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း (နည်းပညာ) | Powered by Blogger